FAQs - Lingshou County Xinfa Mineral Co, Ltd.
Semuenzaniso, nguva yekutungamira inenge mazuva manomwe. Kwekugadzirwa kwakawanda, nguva yekutungamira ndeye mazuva makumi maviri nematatu mushure mekugamuchira mubhadharo wekubhadhara. Nguva dzekutungamira dzinova dzinoshanda kana (1) tawana dhipoziti yako, uye (2) isu tabvumirwa yako yekupedzisira yezvigadzirwa zvako. Kana nguva dzekutungamira dzisingashande neyako nguva yekupedzisira, ndapota enda pamusoro pezvaunoda nekutengesa kwako. Muzviitiko zvese isu tichaedza kugovera zvaunoda. Muzviitiko zvakawanda tinokwanisa kuzviita.
Ehe, isu tinogara tichishandisa yakakwira mhando yekutengesa kunze. Isu tinoshandisa zvakare hunyanzvi hwekutakura mhete kurongedza zvinhu zvine njodzi uye yakakosheswa chengetedzo inotakura vatyairi veidziya inotonhora Nyanzvi kurongedza uye zvisiri-zvakajairika zvongedzo zvinodikanwa zvinogona kuunza imwe mubhadharo.